Waalidiinta dhalinyaro inta xabsi laga soo saaray Lalaayay oo dhaliilay DFS – SBC
Waalidiinta dhalinyaro inta xabsi laga soo saaray Lalaayay oo dhaliilay DFS
Waalidiin ku kulan ku qabtay gudaha magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ayaa dhaliil iyo eed hawada u mariyay dowlada Federaalka Soomaaliya, taas oo timid ka dib markii ay wax ka qaban wayday dil si sharci daro ah dhowaan loogu geystay gudaha Magaalada Dhalinyaro lagala baxay Xabsiyo ay ku xirnaayeen.
Waalidiintan saxaafada la hadlay maanta ayaa waxaa ku jiray waalidiin ka mid ah kuwii dhalay dhalinyarada la sheegay in ciidamada Nabadsugida ay toogteen inta ay xabsiyada kala soo baxeen inkastoo taasi ay beeniyeen wasiiro ka tirsan Xukuumada Federaalka ah.
Waxay Waalidiintan intaasi ku dareen in dowladu ka aamustay kiiska dilka wiilasha lagu toogtay xaafad ka mid ah Muqdisho, iyagoona ku dhaliilay war ay saxaafada ka sheegeen wasiiro uu ka mid yahay wasiirka Amniga qaranka kaas oo ahaa in wiilashaasi ay qaarkood ahaanyeen Alshabaab.
“Waxaan leenahay Arintaasi waa arin fool xun, waana in arin si deg deg ah wax looga qabto, dowladuna ka jawaabto” ayuu yiri mid ka mid ah waalidiintii kulanka ka hadlay.
Qaarkood waalidiintaas ayaa beeniyay hadal Raiisul wasaaraha Soomaaliya Dhowaan Baarlamanka ka horsheegay kaa soo ahaa in caruurtooda ay laayeen xoogaga xarakada Alshabaab xili sirdoonku u adeegsanayeen in qorshe lagula dagaalamayay xarakada Alshabaab.